भेटियो सविताका यस्ता भिडियोहरु, बहिनिले फेरि लिएर आइन मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > भेटियो सविताका यस्ता भिडियोहरु, बहिनिले फेरि लिएर आइन मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 14, 2021 भिडियो, समाज	0
काठमाडौं- यतिखेर फेसबुकदेखि टिकटकसम्म भाइरल भइरहेको विषय हो– चितवनकी सविता भण्डारीको मृत्यु प्रकरण। उनीप्रति न्याय माग्दै सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग नै चलिरहेको छ, जस्टिस फर सविता भण्डारी। सोसल मिडियामा सविताको मृत्युको बहसको विषय बनेको छ। यो घटनामा माईती पक्ष अनी घर पक्ष भएर धेरै अधिकार कर्मीहरु उभिरहेका छन् ।
सबिता भण्डारीको मृत्‍युलाई अस्वाभाबिक मृत्‍यु भनिरहदा एक पक्षले ह’ ‘त्या भनेको छ भने अर्को पक्षले देहत्याग भनिरहेको छ । यता मृतकको माइती पक्षले भने आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। ‘तीन दिनअघि मात्रै लुगा किन्नलाई मसँग पाँच हजार पैसा मागेकी थिई, देहत्याग नै गर्ने भए किन पैसा माग्थी?’ एक युट्युब च्यानलमा बहिनी सजनीले आ शंका व्यक्त गरेकी छिन्।
प्रहरीले झु क्याएर मुचुल्कामा साइन गराउन लगाएको आरोपसमेत उनले लगाएकी छिन्। ‘प्रहरीले यहाँ साइन गरेपछि केस सुरु हुन्छ भनेछन्। दाइले मुचुल्का भन्ने बुझेनछ, अनि साइन गरिदिएछ,’ उनले भनेकी छिन्। यस घटनाको सत्य तथ्य के हो त? अझै बाहिर आएको छैन । यो मुद्द्दा अदालतमा पुगेको छ।
अव न्यायोचित फैसला अदालतअले नगरेसम्मा सबै आमा जनतामा कौतुहलता हुनु स्वाभाबिक हो । मृत्‍युको दिन सबिता टोल सुधार समितिको सरसफाई कार्यक्रममा समेत सामेल भएको छिमेकिले बताएका छन् । आज माईती पक्ष फेरी चितवन गएर यो घटनाको छनबिनको लागि माग गर्न जिल्लामा भएका उच्छ ओदाका पधाधिकारिलाई भेट्ने बताएका छन् ।
बाँकी कुरा हेरौ भिडियोमा:
१२ बजे राति श्रीमानलाई अर्कैसग रंगेहात भेटेपछि, न्याय माग्दै रुदै सन्तोष देउजासँग (भिडियो हेर्नुस्)
किन माता सबिता एका एक दुबई पुगिन ! यस्तो छ कारण (भिडियो हेर्नुहोस )
सुमी राजबंशीको अ स्लिल फोटोहरु सार्बजानिक, सुमीकै साथीले खोले सुमीको घि नलाग्दो रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)